Ankizivavy Mihantsy Ny Fanjakazakan-dehilahy Amin’ny Baolina Kitra Ao India · Global Voices teny Malagasy
Ankizivavy Mihantsy Ny Fanjakazakan-dehilahy Amin'ny Baolina Kitra Ao India
Voadika ny 15 Avrily 2017 6:17 GMT
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, fikambanan'ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena ao India, ary efa nahazo loka. Navoaka eto ambany ny dika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tanora avy ao Varanasi, tanàna ao amin'ny Fanjakana Uttar Pradesh, India Avaratra i Poonam. Natoky tanteraka izy taloha fa tokony hijanona any an-trano ny tovovavy ary manambady avy eo. “Ankehitriny, tsapako fa tokony hanana fahalalahana tanteraka ny tovovavy,” hoy izy. Inona no niova tamin'i Poonam? Amin'ny teny iray: ny fanatanjahantena. Nianatra nilalao baolina izy sy ny ankamaroan'ny tovovavy ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
Rekha Chauhan no talen'ny tetikasan'ny Mahila Swarojgar Samiti (MSS), fikambanana manampy ny tanora ao Varanasi mba hamolavola ny maha izy azy ireo sy hatoky kokoa ny fananahan'izy ireo amin'ny alalan'ny baolina kitra. Hoy i Rekha:
Rehefa milalao ireo tovovavy ireo, milalao malalaka tanteraka; tsy miraharaha raha misy olona mandinika azy ireo, ny nonon'izy ireo. Fanehoana ny fahalalahana tanteraka izany, tahaka ny manidina eny amin'ny toeram-pilalaovana izy ireo.
Ny rafitra fanavakavahana ny vehivavy matetika dia midika fa miatrika fanamby amin'ny lafiny maro ny zazavavy tanora. Ambony kokoa ny tahan'ny fialàna an-tsekoly ambaratonga faharoa eo amin'ny tovovavy. Mametraka loza lehibe ihany koa ny vohoky ny tanora sy ny fanambadiana, ary tsy ampy sakafo na tsy ampy lanja ny tovovavy maro hafa raha oharina amin'ny tovolahy. Mihoatra ny antsasaky ny ankizivavy eo anelanelan'ny 15 sy 19 taona no tratran'ny tsy fahampian'ny sela mena ao amin'ny ra ao India.
Miaraka amin'ireo vato misakana ireo ny faneriterena ara-tsosialy mamparefo ao amin'ny firenena amin'ny fahavitrihana sy ny fahalalahan'ny vehivavy.
Football has remained an a male domain. When girls succeed in “male” domain, confidence grows. @videovolunteershttps://t.co/cUmOjsivPg
— SheThePeople (@SheThePeopleTV) April 5, 2017
Nijanona ho sehatry ny lehilahy ny baolina kitra. Raha mahomby amin'ny sehatry ny “lehilahy” ny tovovavy, dia mitombo ny fahatokisana
Matetika azo sokajiana toy ny seha-dehilahy ny filalaovana fanatanjahantena, ary matetika miatrika fanilikilihana ara-tsosialy ny vehivavy manohitra izany. Na dia manohana aza ny fianakaviana, matetika manery ny tovovavy avy amin'ny fianakaviana mahantra mba handao ny nofiny ho lasa atleta malaza ny tsy firaharahian'ny rafi-panjakana. Saingy afaka manome aingam-panahy lehibe ho an'ny tovovavy ny fahombiazana miavaka, tahaka ny an'i Tajamul Islam, valo taona, mpilalao ady totohondy kickboxer nahazo medaily volamena tao Kashmir.
Miezaka manamora ny maro amin'izany ny fandaharan'ny MSS, manangana sehatra hanaovan'ny tovovavy fanatanjahantena sy mandrisika ny tovovavy hafa hanao izany.
Nanangana vondrom-behivavy miisa 25 izay mihaona matetika iresahana momba ny lahy sy vavy, ny fanjakazakan-dehilahy, ny fananahana sy ny fahasalamana ara-pananahana ny MSS. Ary mba hilalao baolina kitra, mazava ho azy! Manana tanora 20 avy amin'ny fianakaviana sahirana ao Varanasi ny vondrona tsirairay.
Miasa ao amin'ny MSS i Neha ary manaramaso ity fandaharana ity. NIlaza izy fa nahita maso ny baolina kitra mahatonga ny tovovavy ho matoky tena kokoa.
Manome hery ny vatany manontolo izany ary manatsara ny fahasalamana ary mandray anjara lehibe amin'ny famolavolana ny fananahan'izy ireo
Tany am-boalohany, ireo tovovavy tenany mihitsy sy ny ray aman-drenin'izy ireo no nanontany (te-hanohitra) ny fanapahan-kevitra hampianatra azy ireo baolina kitra. Iray amin'izay tanora izany i Rekha Bharati.
Mbola tsy nahita baolina kitra teo amin'ny fiainako aho taloha! Te hanova ny fomba fijerin'ny ray aman-dreniko aho mba hanajanonan'izy ireo ny fanavahana ny zanakalahy sy zanakavavy
Mandia fianarana ny telo ampaha efatr'ireo tovovavy ao amin'ireo vondrona ireo. Ary efa manambady ny dimy. Avy ao vondrom-piarahamonina Dalit na vondrom-piarahamonina silamo avokoa ireo tovovavy rehetra. Hatramin'ny nidirana tao amin'ny vondrona, nilaza ny sasany tamin'ireo ankizivavy fa efa afaka mandray dingana mivaingana amin'ny fanovana ny toe-tsain'ny fianakavian'izy ireo. Maro ihany koa no afaka nifampiraharaha tamin'ny tsy hanambadiana ny ankizy – asa be indrindra ao amin'ny vondrom-piarahamonina mahantra, na dia tsy ara-dalàna amin'ny fomba teknika aza ny fanambadiana alohan'ny maha-olon-dehibe ao India.
Nilaza i Rekha fa mahita ny fiantraikan'ny zavatra toa tsy mampidi-doza tahaka ny baolina kitra miteraka fiovana ara-tsosialy goavana: “Nijanona ho seha-dehilahy tsy iadian-kevitra ny baolina kitra. Raha mahomby amin'ny sehatra lazaina fa an'ny “lehilahy” ny [ankizivavy], dia mitombo ny fahatokisan-tenany. Mahita izy ireo fa afaka manao zavatra amin'izay fady tamin'izy ireo taloha ary maniry fatratra handrava ireo fameperana hafa, “hoy izy.
Eny tokoa, manamafy ny fikarohana manerana izao tontolo izao fa ny filalaovana fanatanjahan-tena anaty ekipa dia fomba mahomby hanatsarana ny fahatokisan-tena eo amin'ny tanora tovovavy, indrindra ireo avy amin'ny sehatra atao anjorom-bala. Manantena ny vondrona tahaka ny MSS fa mampiseho ny lalana irosoan'ny vondrom-piarahamonina manerana ny firenena izy ireo.
Novokarin'ny Video Volunteers niaraka tamin'ny fanohanan'ny Vikalp Sangam ny lahatsary eto ambony. Fisaorana manokana ho an'ilay mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers, Shabanam Begum avy ao amin'ny tanàna Cholapur, Distrikan'i Varanasi, sy Uttar Pradesh. Mandray anjara sy manampy amin'ny fitarihana fanofanana isan-karazany ao Sahbhagai Shikshan Kendra i Shabanam. Nosoratan'i Madhura Chakraborty ny lahatsoratra eo ambony.